झिलमिलाको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार र प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता - Everest Dainik - News from Nepal
महेन्द्रनगर, चैत २५ । भीमदत्त नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा पर्ने झिलमिला तालको पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । झिलमिला ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन संघ र प्रदेश सरकारसित समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि भीनपाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले ताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको नमूना पर्यटकीय स्थल बनाउन पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारका कार्यक्रम प्राथमिकता दिएका छन् ।
पर्यटकलाई सहज रुपमा झिलमिला तालसम्म पुगाउन सडक निर्माण भई रहेको छ । यस वर्ष मटेनाबाट चार किलोमिटर सडक पक्की निर्माण कार्य अघि बढेको छ । त्यसपछि अर्को वर्ष ताराकोटसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
ताराकोटबाट तालसम्मको झण्डै एक किलोमिटर बाटोमा पदमार्ग निर्माण भई रहेका छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का साँसद डा. दिपक प्रकाश भट्टको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत पदमार्ग निर्माण गरिएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, वन, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले तालको परिक्रमा पथ र सोलार बत्ती जडान सहितका कार्यका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव समापन झण्डै दुई हजारले गरे निकुञ्ज अवलोकन
‘यो ताल प्राकृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ, तालमा छिमेकी मुलुक भारतबाट दर्शनार्थी आउँछन्, स्थानीय र छिमेकी जिल्लाबाट समेत आउँछन्’ भीनपाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भने,‘यो प्रकृतिको अनुपम उपहार जस्तै छ, त्यसैले यसलाई संरक्षण, संवद्र्धन गर्न भीनपा लागि परेको छ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको नमूना पर्यटकीय स्थल बनाउन पहलकदमी गरिरहेका छौ ।’ नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख विष्टले बताए । ‘यो तालको संरक्षण र संवद्र्धन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रुपमा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरी अघि बढेका छौ’ उनले भने ।
भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरी सन् २०१९ लाई पूर्वाधार र प्रचार वर्ष घोषणा गरेको छ । यो घोषणा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित झिलमिला ताल, भम्केनी धाम, विष्णु मन्दिर साकेतधाम, रौटेला, बाराकुण्डा, झोलुङ्गे पुल लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई मध्यनजर गरी गरिएको हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उत्तरी क्षेत्रमा जैविक मार्ग र दक्षिण क्षेत्रमा शुक्लाफाँटा पर्यटन मार्ग निर्माण गरिएको छ । ‘झिलमिला तालसम्मका सहज, सभ्य र सुरक्षित यात्रा बनाउन सडक निर्माण गरिरहेका छौ, सुरक्षित र सभ्य बनाउन सुरक्षा निकाय सहित सरोकारवालासित छलफल गरिरहेका छौ,’ उनले भने,‘संघ र प्रदेश सरकारसित पनि सहकार्य गरिएको छ ।’
याे पनि पढ्नुस विचित्रको तालः न पानी घट्छ, न बढ्छ, दैनिक रङ फेरिन्छ !
तालको संरक्षणका लागि यस वर्ष राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसित सहकार्य गरी तालको पश्चिमी किनारमा चेकडयाम ९तटबन्ध० बनाउन लागिएको छ । यसका लागि १५ लाख बजेट खर्च हुने भएको छ । एक हजार एक सय २५ मिटर लम्बाईको परिक्रमा पथमध्ये यस वर्ष दुई सय मिटर थप निर्माण गरिएको छ । भीनपा वडा नं. ९ का अध्यक्ष राम नाथले ताल परिक्रमाका लागि सहज बनाउन परिक्रमा पथ निर्माण गरिएको बताए ।
घना जङ्गलको विचमा रहेको यो १७ मिटर गहिराको यो तालको लम्बाई ५ सय मिटर र चौडाई ३ सय ५० मिटर छ । २०७२ मा तालको लम्बाई, चौडाई र गहिराई मापन गरिएको थियो । दिनमा तीन पटक रङ्ग फेर्ने यो तालमा दैबीय शक्तिका कारण पानी र माछाका आकार स्थिर रहेको स्थानीय बताउँछन् । घना जङ्गलको बिचमा भएर पनि तालमा रुखका पाल देख्न पाइदैन ।
याे पनि पढ्नुस भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा महिलाका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा
भीनपाका नगर प्रमुख विष्टले ताल प्रचारप्रसारका लागि वृत्तचित्र सहित प्रचारप्रासर सामग्री तयार गरिने जानकारी दिए । ताल संरक्षण र व्यवस्थित विकासका लागि गुरु योजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मटेनाबाट झिलमिलासम्म सडक निर्माण सुरु गरिएपछि मन्त्री, साँसद सहित जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवि, उद्यमी व्यवसायीले ताल अवलोकनका लागि जाने गरेका छन् ।
ब्रह्मदेबबाट झिलमिलातालसम्म केबुलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भई रहेको छ । ताराकोटमा भ्यू टावर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले ताराकोटमा पिकनिक स्पट, धर्मशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि छलफल गरिरहेको छ ।
केही महिना अघि पूर्व उद्योग मन्त्री कर्ण थापाले नेताहरु सहित तालको अवलोकन भ्रमण गरेका थिए ।
ट्याग्स: Jhilmila lake, Kanchanpur-Mahendranagar